कोरोना संक्रमित भेटिएपछि मैतीदेवी क्षेत्र सिल, संक्रमितलाई पाटन अस्पताल लगियो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना संक्रमित भेटिएपछि मैतीदेवी क्षेत्र सिल, संक्रमितलाई पाटन अस्पताल लगियो !
कोरोना संक्रमित भेटिएपछि मैतीदेवी क्षेत्र सिल, संक्रमितलाई पाटन अस्पताल लगियो !
काठमाडौं – काठमाडौंको मैतीदेवीमा एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बुधबार संक्रमण पुष्टि भएसँगै ती युवालाई पाटन अस्पताल लगिएको छ। काठमाडौंको मैतीदेवीमा डेरा गरी बस्ने दुई युवामध्ये एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अर्का एक जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।
काठमाडौंको मैतीदेवीमा डेरा गरी बस्ने एक जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबार संक्रमण पुष्टि भएसँगै उक्त क्षेत्र सिल गरिएको छ । मैतीदेवी प्रहरी बिटका अनुसार मैतीदेवी मन्दिरदेखि प्रहरी बिटसम्मको क्षेत्रमा सिल गरिएको छ। १०–१२ वटा घर पूर्णरुपमा सिल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
रामेछापको खाडादेवी–४ स्थायी घर भई मैतीदेवीमा बस्दै आएका उनलाई पाटन अस्पताल लगिएको छ। सँगै बस्ने जुम्ल्याहा दाजुभाइमध्येका दाजुलाई संक्रमण देखिएको हो। भाइलाई भने घरमै क्वारेन्टिनमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। संक्रमित युवक रामेछापबाट वैशाख ३० गते काठमाडौं आएको खुलेकाे छ।
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले संक्रमितको घर भएको क्षेत्रलाई पनि सिल गरिएको जानकारी दिइन्।
वर्षा राउतको स्पष्टीकरण : ‘म राष्ट्रियताको लागि म’र्न तयार छु, हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ’
‘भद्रगोल’ टिमले माग्यो दर्शकसंग सुझाव : यो अवस्थामा हामी के गरौं ?
आँशु खसाल्दै जव नवराजकी आमाले यी कुरा मागिन !
जोखिम मोलेरै नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न, काठमाण्डौबाट चिन उड्यो नेपाली एयरलाइन्स !